ကမ္ဘာ့ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးနေ့ - ဝီကီပီးဒီးယား
Eco Day, Environment Day, WED
This day is observed to create global awareness about environmental problems world oraspecific country is facing.
ဖော်ပြချက် အမှား - နားမလည်သော ပုဒ်ဖြတ် စာလုံး "၁"။
၁၉၇၄ ဇူလိုင် ၅
ကမ္ဘာ့ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးနေ့ အား နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း ဇွန်လ ၅ ရက်နေ့တွင် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း ကျင်းပကြပြီး သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အား ထိန်းသိမ်း ကာကွယ်ခြင်းအား ဆောင်ရွက်ကြသည်။ ယင်းသည် ပတ်ဝန်းကျင် ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းခြင်းအတွက် လှုပ်ရှားမှုနှင့် တစ်ကမ္ဘာလုံးမှ ဂရုပြုပါဝင်လာစေရန် တွန်းအားပေးသည့် ကုလသမဂ္ဂ၏ အရေးပါသော လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခု ဖြစ်သည်။ ၁၉၇၄ ခုနှစ်တွင် စတင်ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး အဏ္ဏဝါညစ်ညမ်းမှုများ၊ လူဦးရေ အဆမတန်တိုးပွားမှုများနှင့် ကမ္ဘာကြီး ပူနွေးလာခြင်း၊ တောရိုင်းတိရစ္ဆာန် မှုခင်းများနှင့် စားသုံးမှုများကို ထိန်းသိမ်းနိုင်ရန် စသည့် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များအား သတိမူလာစေရန် လှုံ့ဆော်ပေးရာတွင် အထင်ကရ ဖြစ်ခဲ့သည်။ ကမ္ဘာ့ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးနေ့သည် နှစ်စဉ် နိုင်ငံပေါင်း ၁၄၃ နိုင်ငံကျော်တွင် ကျင်းပလေ့ရှိသည်။
၂ လက်ခံကျင်းပရာ မြို့များ
၁၉၇၂ ခုနှစ်တွင် ပြုလုပ်သော ကုလသမဂ္ဂ လူ့ပတ်ဝန်းကျင် ညီလာခံ ပထမရက်တွင် ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံက ကမ္ဘာ့ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးနေ့ကို ရွေးချယ်သတ်မှတ်ပေးခဲ့ပြီး နှစ်နှစ်အကြာ ၁၉၇၄ ခုနှစ်တွင် ပထမဆုံးအကြိမ် အဖြစ် "Only One Earth" ဆောင်ပုဒ်ဖြင့် ကျင်းပခဲ့သည်။ ၁၉၇၄ ခုနှစ်မှ စတင်ကာ နှစ်စဉ်ကျင်းပခဲ့ပြီးနောက် ၁၉၈၇ ခုနှစ်တွင် ပင်မလှုပ်ရှားမှုများကို နိုင်ငံအသီးသီးရွေးချယ်ကာ အလှည့်ကျ ကျင်းပခဲ့သည်။
ကမ္ဘာ့ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးနေ့ ကျင်းပမှုကို အောက်ပါ မြို့များတွင် အသီးသီး ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
၁၉၇၄ Only one Earth during Expo '74 Spokane, United States
၁၉၇၅ Human Settlements ဒါကာမြို့၊ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံ
၁၉၇၆ Water: Vital Resource for Life ကနေဒါနိုင်ငံ
၁၉၇၇ Ozone Layer Environmental Concern; Lands Loss and Soil Degradation Sylhet, ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံ
၁၉၇၈ Development Without Destruction Sylhet, ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံ
၁၉၇၉ Only One Future for Our Children – Development Without Destruction Sylhet, ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံ
၁၉၈၀ A New Challenge for the New Decade: Development Without Destruction Sylhet, ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံ
၁၉၈၁ Ground Water; Toxic Chemicals in Human Food Chains Sylhet, ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံ
၁၉၈၂ Ten Years After Stockholm (Renewal of Environmental Concerns) ဒါကာမြို့၊ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံ
၁၉၈၃ Managing and Disposing Hazardous Waste: Acid Rain and Energy Sylhet, ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံ
၁၉၈၄ Desertification Rajshahi, ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံ
၁၉၈၅ Youth: Population and the Environment ပါကစ္စတန်နိုင်ငံ
၁၉၈၆ A Tree for Peace အွန်တေးရီးယိုးပြည်နယ်၊ ကနေဒါနိုင်ငံ
၁၉၈၇ Environment and Shelter: More Than A Roof နိုင်ရိုဘီမြို့၊ ကင်ညာနိုင်ငံ
၁၉၈၈ When People Put the Environment First, Development Will Last ဘန်ကောက်မြို့၊ ထိုင်းနိုင်ငံ
၁၉၈၉ Global Warming; Global Warning ဘရပ်ဆဲမြို့၊ ဘယ်ဂျီယမ်နိုင်ငံ
၁၉၉၀ Children and the Environment မက္ကဆီကိုစီးတီး၊ မက္ကဆီကိုနိုင်ငံ
၁၉၉၁ Climate Change. Need for Global Partnership စတော့ဟုမ်းမြို့၊ ဆွီဒင်နိုင်ငံ
၁၉၉၂ Only One Earth, Care and Share ရီယို ဒီ ဂျီးနေးရိုးမြို့၊ ဘရာဇီးနိုင်ငံ
၁၉၉၃ Poverty and the Environment – Breaking the Vicious Circle ပေကျင်းမြို့၊ တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ
၁၉၉၄ One Earth One Family လန်ဒန်မြို့၊ ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း
၁၉၉၅ We the Peoples: United for the Global Environment Pretoria, တောင်အာဖရိကနိုင်ငံ
၁၉၉၆ Our Earth, Our Habitat, Our Home အစ်စတန်ဘူလ်မြို့၊ တူရကီနိုင်ငံ
၁၉၉၇ For Life on Earth ဆိုးလ်မြို့၊ တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံ
၁၉၉၈ For Life on Earth – Save Our Seas မော်စကိုမြို့၊ ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်း
၁၉၉၉ Our Earth – Our Future – Just Save It! တိုကျိုမြို့၊ ဂျပန်နိုင်ငံ
၂၀၀၀ The Environment Millennium – Time to Act အက်ဒလိတ်မြို့၊ ဩစတြေးလျနိုင်ငံ
၂၀၀၁ Connect with the World Wide Web of Life တျူးရင်းမြို့၊ အီတလီနိုင်ငံ နှင့် ဟာဗားနားမြို့၊ ကျူးဘားနိုင်ငံ
၂၀၀၂ Give EarthaChance ရှိန်းကျိန့်မြို့၊ တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ
၂၀၀၃ Water – Two Billion People are Dying for It! ဘေရွတ်မြို့၊ လက်ဘနွန်နိုင်ငံ
၂၀၀၄ Wanted! Seas and Oceans – Dead or Alive? ဘာစီလိုနာမြို့၊ စပိန်နိုင်ငံ
၂၀၀၅ Green Cities – Plan for the Planet! ဆန်ဖရန်စစ္စကိုမြို့၊ အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု
၂၀၀၆ Deserts and Desertification – Don't Desert Drylands! အယ်လဂျီးယားမြို့၊ အယ်လ်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံ
၂၀၀၇ Melting Ice –aHot Topic? လန်ဒန်မြို့၊ ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း
၂၀၀၈ Kick The Habit – Towards A Low Carbon Economy ဝယ်လင်တန်မြို့၊ နယူးဇီလန်နိုင်ငံ
၂၀၀၉ Your Planet Needs You – Unite to Combat Climate Change မက္ကဆီကိုစီးတီး၊ မက္ကဆီကိုနိုင်ငံ
၂၀၁၀ Many Species. One Planet. One Future Rangpur, ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံ
၂၀၁၁ Forests: Nature at your Service နယူးဒေလီမြို့၊ အိန္ဒိယနိုင်ငံ
၂၀၁၂ Green Economy: Does it include you? ဘရာဇီးနိုင်ငံ
၂၀၁၃ Think.Eat.Save. Reduce Your Foodprint မွန်ဂိုလီးယားနိုင်ငံ
၂၀၁၄ Raise your voice, not the sea level ဘာဘေးဒိုးစ်နိုင်ငံ
၂၀၁၅ Seven Billion Dreams. One Planet. Consume with Care. အီတလီနိုင်ငံ
၂၀၁၆ Zero Tolerance for the Illegal Wildlife trade အန်ဂိုလာနိုင်ငံ
၂၀၁၇ Connecting People to Nature – in the city and on the land, from the poles to the equator ကနေဒါနိုင်ငံ
↑ World Environment Day5June 2008 – UNEP Archived 11 June 2008 at the Wayback Machine., accessed6June 2008
Wikimedia Commons တွင် World Environment Day နှင့် ပတ်သက်သော မီဒီယာ ရှိသည်။
UNEP, World Environment Day Archived 11 April 2016 at the Wayback Machine.
2005 Archived3March 2011 at the Wayback Machine., 2006 Archived3March 2011 at the Wayback Machine., 2007 Archived3April 2013 at the Wayback Machine., 2008 Archived6June 2008 at the Wayback Machine., 2009 Archived 10 May 2009 at the Wayback Machine. / Previous themes of World Environment Day Archived4March 2016 at the Wayback Machine.
World Environment Day (WED) Grassroots Facebook Campaign
Chicago Botanic Garden, 2008 North American host city site
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ကမ္ဘာ့ပတ်ဝန်းကျင်_ထိန်းသိမ်းရေးနေ့&oldid=674460" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၂၆ ဩဂုတ် ၂၀၂၁၊ ၀၈:၃၂ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။